विशेष पहिलो चरणमा कांग्रेसलाई जम्मा १ सिट, एमालेको अनुमान फेल
Ujyaalo आइतवार, मंसिर २४, २०७४ ०८:०२:००
काठमाडौं, मंसिर २३ – प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो चरणमा भएको चुनाव भएका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले अहिलेसम्म रसुवामा मात्रै जित हात पारेको छ ।
कांग्रेसको यो सिट एमालेले अनुमान गरेकोभन्दा पनि कम हो । एमालेले पहिलो चरणमा कांग्रेसको बढिमा ३ सिट आउने विश्लेषण गरेको थियो । तर पहिलो चरणमा चुनाव भएका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले ३ सिट ल्याउने सम्भावना निकै कम छ ।
पहिलो चरणको चुनाव भएका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ ठाउँको मात्रै नतिजा आउन बाँकी छ । मतगणना भैरहेका सबै ठाउँमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता छ । नतिजा सार्वजनिक भएका ३१ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमाले १७, माओवादीको ११, कांग्रेसको १, स्वतन्त्र एक, र नयाँशक्तिको १ सिट आएको छ ।
पहिलो चरणमा चुनाव भएको प्रदेश १ मा पर्ने सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङमध्ये अब संखुवासभाको मात्रै नतिजा आउन बाँकी छ । त्यहाँ एमालेको अग्रता छ ।
भोजपुर र सोलुखुम्बुमा माओवादी, ओखलढुंगामा एमाले, पाँचथरमा एमाले र खोटाङमा पनि एमाले विजयी भएको छ ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ३ का ६ वटा जिल्लामा पहिलो चरणमा चुनाव भएको थियो । यसमध्ये नुवाकोटका दुई क्षेत्र र रामेछापको नतिजा आउन बाँकी छ । नुवाकोटमा दुवै क्षेत्रमा वाम उम्मेदवारको जित सुनिश्चित जस्तै छ । कांग्रेसका डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी हार नजिक पुगेका छन् । मतगणना भैरहेको रामेछापमा पनि माओवादीका उम्मेदवार अगाडि छन् ।
रसुवामा कांग्रेसले जितेको छ भने धादिङका दुईवटै क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोक २ र दोलखामा एमाले विजयी भएको छ । माओवादीले सिन्धुपाल्चोक १ मा जित हात पारेको छ ।
पहिलो चरणमा चुनाव भएका प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा २ मा नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराईले जित्नुबाहेक अरुमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले जित हात पार्न सकेन । मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र बाग्लुङ १ मा एमाले तथा बागलुङ २ र गोरखा १ तथा लमजुङमा माओवादीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
पहिलो चरणमा प्रदेश ५ का रुकुम पूर्व र रोल्पामा चुनाव भएको थियो । रुकुममा माओवादी विजयी भैसकेको छ भने रोल्पामा पनि माओवादीका वर्षमान पुनको जित सुनिश्चित जस्तै छ ।
प्रदेश नं. ६ मा रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा चुनाव भएकोमा सबैको नतिजा आइसकेको छ । हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, जुम्ला र कालिकोटमा माओवादी तथा मुगु र डोल्पामा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
यस्तै पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ७ मा दार्चुला, वझाङ, बाजुरा र बैतडीमा चुनाव भएकोमा सबैमा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।